RF နည်းပညာလမ်းညွှန်များ - FMUSER ၏ဘလော့များ
အသုံးမပြုသော FM ကြိမ်နှုန်းကို ရှာပါ။
PCB Board ပြုလုပ်နည်း
RF Filter ဆိုတာဘာလဲ
FM အသံလွှင့်စက် အပြည့်အစုံ
Discone Antenna 101 - သင့်စိုးရိမ်မှုအားလုံးကို ဧရိယာတစ်ခုတည်းတွင် အဖြေပေးသည်။
လေဝဘ်ဆိုဒ် လမ်းကြောင်းကို စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ခြေရာခံသည့် ဂိတ်များကို အောင်မြင်စွာ စစ်ဆေးရန် သင့်အား အဘယ်အရာက ကူညီပေးသည်ဟု ထင်မြင်သနည်း။ ၎င်းမှာ Discone Antenna ဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်တွင် သင်သည် အောက်ရောက်နေသည်ဟု ယူဆပါက၊ ဤအင်တင်နာနှင့် ပတ်သက်သည့် အရိပ်အမြွက်မျှလောက် မရှိဟု ကျွန်ုပ်တို့ ထင်ပါသည်။
Exothermic Welding ဖြင့် Ground Rods များကို မည်သို့ချည်နှောင်မည်နည်း။
ဤဆောင်းပါးတွင်၊ သင်၏မြေပြင်ဝင်ရိုးစွန်းများကို အပူဒဏ်ခံနိုင်ရန် CADweld uni-shot ကိုအသုံးပြုနည်းကို သေချာပေါက်ပြောပြပါမည်။ ဤနည်းလမ်းသည် သင့်မြေသားချောင်းများနှင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးပြီး သင့်မြေပြင်ချောင်းများနှင့် မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကြိုးများကို ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ဤနည်းလမ်း။
exothermic ဂဟေဆော်ခြင်းဖြင့်/ Bond Ground Rods
ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးအတွက် Turnstile Antenna ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။
ဤနေရာတွင်2မီတာအပျော်တမ်းရေဒီယိုတီးဝိုင်းတွင် အာကာသဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသော Turnstile အင်တင်နာ၏ အဆောက်အဦနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဥ်များဖြစ်သည်။
by/ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးအတွက် Turnstile Antenna ကိုတည်ဆောက်ပါ။
၎င်းကို CB ရေဒီယို၊ HAMS၊ Walkie talkies သို့မဟုတ် GMRS အဖြစ်ခွင့်ပြုပါ၊ ၎င်းတို့သည် ဖုန်းများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည်။ အော်ပရေတာမှ သင့်အား စရိတ်စကများ မကောက်ခံသော်လည်း သင့်မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများနှင့် အဆက်အသွယ်မပြတ်လိုပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ဒါတွေက သင်ရွေးချယ်ရမယ့် အရာတွေပါ။
2 Meter Vertical Antenna ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။
အကယ်၍ ဒေါင်လိုက်အင်တင်နာဟောင်းသည် ၎င်း၏ အမြှေးပါးများ ဆုံးရှုံးသွားသည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အပျော်တမ်းရေဒီယို repeater အများအပြားကို မထိပါးနိုင်ခဲ့ပါက သင်သည်2mHz အတွက် 1 meter 4/146 wave vertical antenna ကို တီထွင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အပျော်တမ်းရေဒီယိုတီးဝိုင်း။ ဤသည်မှာ သင့်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည်။
by/ ဒေါင်လိုက်အင်တင်နာကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။
စက်ဘီးမိုဘိုင်းအတွက်2မီတာ အင်တင်နာကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။
သင်၏ HT စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက် အကြီးမားဆုံး ပြဿနာမှာ သင့်စက်ဘီးပေါ်ရှိ သင့်လျော်သော အင်တင်နာတစ်ခုအား စဉ်းစားနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ စက်ဘီးသည် မြေပြင်လေယာဉ်ကို များများစားစားမပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ အင်တင်နာအတွက် အစီအစဉ်များကို ပို့စ်တွင် ရှင်းပြထားသည်။
by/ စက်ဘီးမိုဘိုင်းအတွက် အင်တင်နာတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။
70cm Ham Band အတွက် J-Pole Antenna ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။
ဤတွင် တည်ဆောက်ရအလွန်လွယ်ကူသော ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော J-pole အင်တင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နာရီအချိန်တစ်ခုအပြင် ဒေါ်လာ 10 တန်သောပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍၊ သင်သည် အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသော omnidirectional j-pole အင်တင်နာကို ရရှိနိုင်သည်။
by/ Ham ရေဒီယိုအတွက် J-pole Antenna တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါ။
6 FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအင်တင်နာဝယ်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် အကြံပြုချက်များ
FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန အင်တင်နာသည် အရေးကြီးဆုံးနှင့် စျေးအကြီးဆုံး ထုတ်လွှင့်သည့်ကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်ကို သင်သိပါသလား။ ဤမျှဝေမှုသည် သင့်အား အကောင်းဆုံးဝယ်ယူမှု အကြံပြုချက်6ခုကို ပေးလိမ့်မည်။
by/ FM ရေဒီယိုစခန်း အင်တင်နာ ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ
RF Dummy Load ကိုဝယ်သည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးသောအချက် ၆ ချက်
မည်သည့် RF ပစ္စည်းကိုမဆို စမ်းသပ်ရန် လိုအပ်ပါက RF dummy load သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး RF dummy load ကို ဘယ်လိုမှတ်မိမလဲ။ FMUSER သည် သင့်အား ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသော အချက်6ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
RF Dummy Load ဝယ်ခြင်းအတွက် အမှတ်များ
Dipole Antenna 101 - သင့်မေးမြန်းမှုအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းတွင် တုံ့ပြန်သည်။
Dipole သည် တစ်ဝက်ခွဲထားပြီး insulator ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော conductive wire rod ပါ၀င်သော လွယ်ကူသော အင်တင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရေဒီယိုအင်တင်နာအမျိုးအစားသည် လှိုင်းအလျားကို အမြင့်ဆုံးအလျားထက် နှစ်ဆပိုရှည်စေသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်။
Piling Antennas အတွက် Phasing Harness ကို တီထွင်ပါ။
မကြာသေးမီက၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင်၊ two-bay antenna အတွက် phasing harness တစ်ခုပြုလုပ်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ (သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်) ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော် ဒုက္ခရောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ အချို့သော အင်တင်နာ မြင်ကွင်းအတွက် ၎င်းကို မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က အွန်လိုင်းတွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် ဝဘ်ဆိုဒ် မရှိတော့ပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အဖြေရှာရမယ်။ ကျွန်ုပ်၏ (အလွန်ညံ့ဖျင်းသော) မှတ်စုများကို နာရီအတော်ကြာ စစ်ဆေးပြီးနောက်တွင် ကျွန်ုပ် ပြေလည်သွားသည်။
Mag Mount ကိုအသုံးပြု၍ NVIS အင်တင်နာ AKA Cloud Burner Antenna ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
Ham ရေဒီယိုယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ဆက်သွယ်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်။ လာမည့် Ohio NVIS Antenna Day တွင် NVIS အင်တာနာများကို ကြည့်ရှုရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Near Event Vertical Skywave အင်တာနာများဟု ရည်ညွှန်းသော NVIS အင်တာနာများသည် မြင့်မားသောရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုရှိသည်။ 60 ဒီဂရီ၏အစီစဥ်ပေါ်တွင်တစ်ခုခု, 90 ဒီဂရီမှတိုက်ရိုက်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မိုင် 50 အကွာအဝေးရှိ yagi အင်တင်နာပါရှိသော UHF နှင့် VHF အချက်ပြမှုများနှင့် မတူဘဲ NVIS အင်တင်နာကိုလည်း 75-- 500-မိုင် အမျိုးအစားများတွင် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုရန်အတွက် ပြုလုပ်ထားသည်။ ရံဖန်ရံခါတွင် NVIS အင်တာနာသည် ပုံမှန်အင်တင်နာထက် ဓါတ်ရောင်ခြည်များစွာကို အထက်သို့ ပို့ဆောင်သောကြောင့် "cloud heater" ဟု ရည်ညွှန်းသည်။
မရှိခြင်းဇယား - LackRack ဖြင့် သင့်ကိုယ်ပိုင် စက်ပစ္စည်းစင်
မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်သည် 19 လက်မ ကိရိယာတန်ဆာပလာတစ်ခု လိုအပ်လာသည်။ ဒါပေမယ့် စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဆောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်တော့ IKEA ရဲ့ Lack Table ကိုသုံးတဲ့ LackRack လို့ ခေါ်တာတွေ့တယ်။ သို့သော်လည်း နောက်ထပ်ဖတ်ရှုခြင်းမှာ LackRack ၏မူရင်းဒီဇိုင်းတွင် လွဲချော်နေသည်ဟု ထင်ထားသည့်အရာအချို့ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
စတင်သူများအတွက် အနည်းဆုံး FM အသံလွှင့်ကိရိယာများစာရင်း
RF အစပြုသူများအနေဖြင့် FM ရေဒီယိုလိုင်းကို ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးဖြင့် မည်သို့စတင်ကြသနည်း။ သင့်ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်အတွက် ရည်ညွှန်းရန်အတွက် FMUSER သည် သင့်အတွက် အနည်းဆုံး FM အသံလွှင့်ကိရိယာကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
by/ အနည်းဆုံး FM အသံလွှင့်စက်များစာရင်း
အဆင့်5ဆင့်ဖြင့် အကောင်းဆုံး Low Power FM Transmitter ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
အရည်အသွေးမြင့် ပါဝါ FM အသံလွှင့်စက်သည် FM ရေဒီယို အော်ပရေတာတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာ သင်သိပါသလား။ FMUSER သည် ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရာတွင် ကူညီရန် အဆင့်5ဆင့်ကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
by/ LPFM Transmitter ဝယ်ယူခြင်း အဆင့်များ
VHF TV Transmitters အတွက် အကောင်းဆုံး ဝယ်ယူမှု အကြံပြုချက်6ခု
VHF TV transmitter ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး VHF တီဗီထုတ်လွှင့်စက်ကို ကောက်ယူရာတွင် ကူညီရန်အတွက် အကောင်းဆုံးတစ်ခုအတွက် ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်6ခုကို အကျဉ်းချုံးဖော်ပြအပ်ပါသည်။
19 လက်မအရွယ် စက်ပစ္စည်းများကို စင်တစ်ခုတွင် တပ်ဆင်နည်း
19'' ကိရိယာတန်ဆာပလာအားလုံးနီးပါး ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ဘေးဘက်သံလမ်းများတွင် 10-32 ဝက်အူများကိုအသုံးပြုပါ၊ ၎င်းတို့ထဲမှနှစ်ခုကိုရယူပြီးဝက်အူပေါ်တွင် 10-32 အခွံမာသီးနှစ်ခုကိုထည့်ကာ ၎င်းတို့ကို ရောနှောပါ။ ပြီးရင် အားလုံးကို ပန်းကန်လုံးထဲမှာ ညှပ်ထားပါ။
အဆင့်5ဆင့်ဖြင့် Dipole FM အင်တင်နာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
အရည်အသွေးမြင့် Dipole FM အင်တင်နာသည် သင်၏ FM ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာနကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ FMUSER သည် အဆင့်5ဆင့်တွင် အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
by/ Dipole FM အင်တင်နာ ဝယ်ယူခြင်း အဆင့်များ
POTA အတွက် 20 မှ 40 မီတာ ဒေါင်လိုက် အတိုချနည်းကို DIY လုပ်နည်း
သင်၏ဂီယာအားလုံးကို ထုပ်ပိုးထားသည့် POTA activation ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် QRP ပါဝါအသုံးပြုသည့် ပန်းခြံတစ်ခုကိုလည်း အစပျိုးပေးသည့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အချက်တစ်ခုရှိသည်။
VSWR ဆိုတာဘာလဲ - RF Beginner များအတွက် လွယ်ကူသောလမ်းညွှန်
VSWR သည် RF အော်ပရေတာများအတွက် အရေးကြီးပြီး ၎င်းသည် RF စနစ်၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ VSWR ကို နားလည်လား။ ဤသည်မှာ သင့်အတွက် လွယ်ကူသောလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
by/ VSWR ဆိုတာဘာလဲ
6 FM Broadcast Transmitter Antenna အတွက် အကြံဉာဏ်များ ဝယ်ယူခြင်း။
အရည်အသွေးမြင့် FM ထုတ်လွှင့်မှု ထုတ်လွှင့်သည့် အင်တင်နာသည် သင့် FM ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာနကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လွှင့်နိုင်ပြီး သင့်လုပ်ငန်းကို ကြီးထွားအောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။ FMUSER သည် သင့်အား ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်6ခုဖြင့် အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။
by/ FM အသံလွှင့်စက် အင်တင်နာ ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ
2 Meter J-pole Antenna ကို DIY တည်ဆောက်နည်း
စျေးသက်သာတဲ့အပြင် ရိုးရှင်းတဲ့ အင်တင်နာကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် J-pole အင်တင်နာက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ တစ်နာရီအချိန်အပြင် $15 တန်ဖိုးရှိ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော လည်ပတ်နေသည့် omnidirectional j-pole အင်တင်နာကို သင့်တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
by/ DIY J တိုင်အင်တင်နာ
ပါဝါနိမ့်တဲ့ ရေဒီယို ဘူတာရုံ စက်ပစ္စည်းတွေ ရှိသင့်သလား။
by/ LPFM ရုပ်သံလွှင့်ကိရိယာ
Broadcasting ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ ? - FMUSER
အသံလွှင့်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် ဂရုစိုက်သင့်တာလဲ။ ဤသည်မှာ FMUSER မှ ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်အပြည့်အစုံမှာ ၎င်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်နှင့် ၎င်းသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဆက်လေ့လာပါ။
အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာအတွက် အကျဉ်းချုပ် မိတ်ဆက် - FMUSER
အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် ဂရုစိုက်သင့်တာလဲ။ ဤသည်မှာ အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့် ၎င်း၏အခြေခံအမျိုးအစားအချို့အကြောင်း အပြည့်အစုံဖော်ပြထားသည်။ ဆက်လေ့လာပါ။
မဝယ်မီ FM Radio Transmitters များအကြောင်း သိထားရမည့် ထိပ်တန်းအချက် ၃ ချက်
ကျွန်ုပ်၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မျှော်လင့်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သော FM ရေဒီယိုကို မည်သို့ရွေးချယ်နိုင်မည်နည်း။ ဒီမေးခွန်းကို လူတော်တော်များများ တွေးဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ မဝယ်မီ အရေးကြီးသော ကြိုတင်သတိထားချက်များကို မှတ်သားခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ ဤဘလော့ဂ်သည် FM transmitter ၏လုပ်ဆောင်ပုံကို အတိုချုံးရှင်းပြမည်ဖြစ်ပြီး၊ transmitter တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ အရေးကြီးဆုံးအချက် (၃) ချက်ကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး၊ ဘေးကင်းမှု၊ လုံခြုံမှု၊ FM transmitter ဝယ်ယူလိုသူများအတွက် ကူညီပေးမည့် သုံးစွဲသူများအား ကူညီပေးရန်၊ ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလုပ်ဖို့။ ဒီဘလော့ဂ်က သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီစာမျက်နှာကို မျှဝေဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
FM Radio Transmitter | နှင့်ပတ်သက်သော အခြေခံအချက်များ FMUSER အသံလွှင့်ခြင်း။
ရေဒီယို အသံလွှင့်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ပါက FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်ကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤစာမျက်နှာသည် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေခံအချက်အချို့ကို သင်လေ့လာရန် ကူညီပေးပါမည်။
Yagi Antenna | နိဒါန်း FMUSER အသံလွှင့်ရုံ
Yagi အင်တင်နာဘာကြောင့်ဒီလောက်နာမည်ကြီးတာလဲ။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့် အပလီကေးရှင်းများအကြောင်း အခြေခံနားလည်ကြပါစို့။ အဲဒါကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
by/ Yagi Antenna မိတ်ဆက်
FM အသံလွှင့်ခြင်းအတွက် သင့်တွင်ရှိသင့်သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းပက်ကေ့ချ် အပြည့်အစုံ
ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုတွင် ရုပ်သံလွှင့်ကိရိယာ အမျိုးအစားမည်မျှရှိသနည်း၊ ဤအသံလွှင့်စက်များသည် မည်ကဲ့သို့ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြသနည်း။ ဒီလို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသံလွှင့်စက်တွေကို ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။ ဤစာမျက်နှာသည် ဤမေးခွန်းများကို ဖြေပေးလိမ့်မည်။
by/ FM အသံလွှင့်စက် အပြည့်အစုံ
ရေဒီယိုစခန်းအတွက် အကောင်းဆုံး စွမ်းအားမြင့် FM Transmitter ကဘာလဲ။
စွမ်းအားမြင့် FM transmitter ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ်လို အရည်အသွေးတွေ ရှိသင့်သလဲ။ ပြီးတော့ 5kw FM transmitter လိုမျိုး စွမ်းအားမြင့် FM transmitter ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။ ၎င်းတို့အားလုံးကို ဤစာမျက်နှာတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
ရေဒီယိုစခန်းအတွက်/ စွမ်းအားမြင့် FM ထုတ်လွှင့်စက်
Christmas Lights Display အတွက် အကောင်းဆုံး Low Power FM Transmitter ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ခရစ္စမတ်နေ့ရောက်တော့မယ်၊ ခရစ္စမတ်မီးရောင်စုံခင်းကျင်းဖို့ စိတ်ကူးရှိလား။ သို့သော် Chritsmas Light Display အတွက် အကောင်းဆုံး ပါဝါနိမ့် FM transmitter ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။ ဤသည်မှာ သင်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။
ခရစ္စမတ်အတွက် / အကောင်းဆုံး LPFM ထုတ်လွှင့်မှု
သင့် TV Transmitter Station အတွက် အကောင်းဆုံး Analog TV Transmitter ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ဤဘလော့ဂ်တွင် အခြေခံမိတ်ဆက်မှု၊ မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံ၊ ဆက်စပ်တီဗီထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့် ၎င်းကိုဘယ်မှာဝယ်ရမည်နည်း။
by/ Analog TV Transmitter ကိုရွေးချယ်ပါ။
TV Transmitter Station အတွက် အကောင်းဆုံး အသံလွှင့်ကိရိယာ
အထူးသဖြင့် UHF TV transmitter နှင့် UHF tv transmitter အင်တင်နာအတွက် အကောင်းဆုံး အသံလွှင့်ကိရိယာက ဘာလဲ။ ပြီးတော့ သူတို့ကို ဘယ်လိုရွေးမလဲ။ ဤစာမျက်နှာသည် သင့်အား အကြံဥာဏ်များပေးလိမ့်မည်။
by/ TV Transmitter Station စက်ပစ္စည်း
Audio Distortion နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်တော့မှ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်
ဖောက်သည်များစွာသည် FMUSER မှ transmitter နှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာအချို့ကိုအမြဲမေးသည်။ အဲဒီအထဲမှာ သူတို့က စကားလုံးပုံမမှန်တာကို အမြဲပြောနေကြတယ်။ ဒါဆို ပုံပျက်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့် ပုံပျက်နေတာလဲ။ အကယ်၍ သင်သည် FM ရေဒီယိုလိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်နေပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် FM ရေဒီယိုလွှင့်စက်ကို ရှာဖွေနေပါက၊ ဤစာမျက်နှာမှ အရေးကြီးသော အကြံပြုချက်အချို့ကို သင်ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
FM Broadcast Transmitter မဝယ်ခင် စဉ်းစားရမယ့် အချက် ၅ ချက်
FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက် ရေဒီယိုလှိုင်းများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် လွှမ်းခြုံထားသော နားဆင်သူများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်သည့် အီလက်ထရွန်နစ် ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လက်တွေ့ကျကျ၊ တတ်နိုင်သော၊ တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပြီး ရေဒီယိုအသံလွှင့်လုပ်သားအများအပြားထံမှ နှစ်သက်မှုကို ရရှိသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင် FM အသံလွှင့်စက်ကို ဝယ်ယူရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက မည်သည့် parameters များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိပါသလား။ ဤမျှဝေမှုသည် သင့်အား အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အဓိကအချက် ၅ ချက်ကို ပြောပြပါမည်။
by/ FM Transmitter များ ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ
ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်းတွင် FM အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။
ယနေ့ခေတ်တွင် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်းတွင် အသုံးများဆုံး မော်ဂျူလာနည်းလမ်းများမှာ AM နှင့် FM ဖြစ်သည်။ သမိုင်းတွင် AM ရုပ်သံလွှင့်ခြင်းမှာ FM ထုတ်လွှင့်ခြင်းထက် ဆယ်စုနှစ်များစွာစောပြီး ပေါ်ထွန်းခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် လူများက လက်ခံခဲ့ကြသည်။ FM ထုတ်လွှင့်ခြင်း ရေဒီယို အသံလွှင့်ရုံတွေမှာ ပိုပါတယ်။ AM သည် အလွန်အရေးကြီးနေသေးသော်လည်း ၎င်းကို အသုံးပြုမှုနည်းသွားပါသည်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရာတွင် အဘယ်ကြောင့် FM လိုအပ်သနည်း။ ဤဆောင်းပါးသည် AM နှင့် FM အကြားခြားနားချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ဤမေးခွန်းကို ဖြေဆိုမည်ဖြစ်ပါသည်။ စလိုက်ရအောင်။
by/ ဘာကြောင့် FM အရေးကြီးတာလဲ။
FM အသံလွှင့်ရေဒီယိုစခန်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
FM ရေဒီယိုသည် လူများစွာတို့၏ဘဝထဲသို့ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အသုံးအများဆုံး ထုတ်လွှင့်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ သူတို့သည် လူများကို ဘဝ၏ပျော်ရွှင်မှုကို ယူဆောင်လာစေရန် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ၏ အသံအစီအစဉ်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လွှင့်ကြသည်။ သို့သော် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနသည် ဤအသံများကို မည်သို့မှတ်တမ်းတင်ပြီး အစီအစဉ်ကို ရေဒီယိုမှတစ်ဆင့် အသံထွက်စေသည်ကို သင်သိပါသလား။ ဒီဆောင်းပါးကတဆင့် မင်းကို အဖြေကို ပြောပြလိမ့်မယ်။
by/ FM ရေဒီယိုစခန်းတစ်ခု အလုပ်လုပ်ပုံ
အကောင်းဆုံး စီးပွားဖြစ် FM ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်မှုဆိုတာ ဘာလဲ
FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်သည် စီးပွားဖြစ် ရုပ်သံလွှင့် ကုမ္ပဏီတိုင်း၏ အဓိက ပင်မဖြစ်သောကြောင့် ရေဒီယိုဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အချို့သော ဧရိယာကို လွှမ်းခြုံကာ ရေဒီယိုကဲ့သို့သော လက်ခံသူတိုင်းထံ ရေဒီယို အချက်ပြမှုကို ထုတ်လွှင့်ရန် ဖြစ်သည်။ FM transmitter သည် ရေဒီယို အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်ပေးသော အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
by/ အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းသုံး FM ထုတ်လွှင့်သူ
Studio Transmitter Link (STL) မိတ်ဆက်
Studio Transmitter Link (Studio Transmitter Link) သည် အသံလွှင့်လုပ်ငန်းတွင် ထူးခြားသော ကြိုးမဲ့အသံထုတ်လွှင့်မှုနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုလင့်ခ် သို့မဟုတ် စတူဒီယိုမှထုတ်လွှင့်သည့်လင့်ခ် သို့မဟုတ် စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုလင့်ခ်လင့်ခ်ကို ဒစ်ဂျစ်တယ်စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်နှင့် အန်နာလော့စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်ဟူ၍ ပိုင်းခြားနိုင်သည်။ Studio Transmitter လင့်ခ်ကိရိယာများကို Studio Transmitter Link transmitter၊ Studio Transmitter Link receiver နှင့် Studio Transmitter Link antenna ကဲ့သို့သော ကိရိယာများအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုလင့်ခ်များ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးနှင့် ကွဲပြားပါသည်။ စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်၏ အမျိုးအစားနှင့် လုပ်ဆောင်မှုနိယာမကို နားလည်ခြင်းသည် စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်များကို ထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်။
by/ STL မိတ်ဆက်
FM ရေဒီယို Dipole အင်တင်နာ | FMUSER အသံလွှင့်ရုံ
FM dipole အင်တင်နာသည် အရိုးရှင်းဆုံးနှင့် အကျယ်ပြန့်ဆုံး အင်တင်နာအမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့် မည်သူမဆို ရိုးရှင်းသောပစ္စည်းများသာ လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူပါသည်။ သင့်ရေဒီယို ယာယီအင်တင်နာလိုအပ်ပါက DIY FM dipole အင်တင်နာသည် လက်တွေ့ကျပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတော့ FM dipole အင်တင်နာကို ဘယ်လို DIY လုပ်မလဲ။ ဆောင်းပါးက သင့်ကို ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
by/ FM အင်တင်နာ DIY
FM Radio Dipole Antenna | မိတ်ဆက် FMUSER အသံလွှင့်ရုံ
by/ FM Dipole Antenna ဆိုတာဘာလဲ
FM Radio Transmitter များအတွက် အသုံးမပြုသော Frequency ကို မည်သို့ရှာရမည်နည်း။
FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်များသည် သင့်မိုဘိုင်းစက်၏ ဂီတကို နားထောင်ရန် အလွယ်ကူဆုံးနှင့် အတတ်နိုင်ဆုံး နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် လူသစ်တွေအတွက်တော့ အနှောင့်အယှက်ကင်းတဲ့ ကြိမ်နှုန်းကို ရှာတွေ့ဖို့ အနည်းငယ် ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုသော FM လှိုင်းနှုန်းကို ရှာဖွေရာတွင် နှောက်ယှက်ပါက၊ ဤမျှဝေမှုသည် သင့်အတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။
by/ အသုံးမပြုသော FM ကြိမ်နှုန်းကို ရှာပါ။
DSP-Digital Signal Processing မိတ်ဆက် | FMUSER အသံလွှင့်ရုံ
DSP နည်းပညာကို အသုံးချသည်။ FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်များ အသစ်သောအရာမဟုတ်ပါ။ အများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်များ. ဒါဆို ဘယ်လိုနည်းပညာမျိုးလဲ။ ဤမျှဝေမှုသည် DSP ၏လုပ်ဆောင်မှုနိယာမ၊ DSP စနစ်၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် DSP ၏လုပ်ဆောင်ချက်တို့ကို ကဏ္ဍသုံးရပ်ဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
by/ DSP - ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြမှု လုပ်ဆောင်ခြင်း။
ဈေးနှုန်းချိုသာသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်ကို ဘယ်မှာဝယ်ရမည်နည်း။
ဘတ်ဂျက်သည် သင့်အား မည်သည့်ရေဒီယို အသံလွှင့်ကိရိယာအမျိုးအစားများကို ရွေးချယ်ရန် အကျိုးသက်ရောက်စေမည့် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အများအားဖြင့်၊ ဈေးနှုန်းသက်သာသော ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို စွန့်လွှတ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
by/ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အသံလွှင့်စက်
FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် ဘာစက်ပစ္စည်းတွေ လိုအပ်လဲ။
FM ရေဒီယိုလိုင်းတစ်ခု ဆောက်ပြီး ဘာဝယ်ရမလဲ သိချင်နေလား။ ဤပို့စ်သည် သင့်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ FM အသံလွှင့်ကိရိယာများနှင့် FM ရေဒီယိုပစ္စည်းများ ရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်း အပြည့်အစုံလမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည်။ မသွားခင် အတိမ်အနက်၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုစတင်ရန် လိုအပ်သော ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်များ၏ ယေဘုယျအမြင်ကို သင့်အား ပေးဆောင်လိုပါသည်။
by/ ရေဒီယိုစခန်းအတွက် စက်ပစ္စည်း
အကောင်းဆုံး FM ရေဒီယို Transmitter ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ။
FM Transmitter တစ်ခုကို သင်ရွေးချယ်သောအခါတွင်၊ ၎င်းတွင်တင်ထားသော ဘောင်များနှင့်ပတ်သက်၍ သင်စိတ်ရှုပ်သွားနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံး FM Radio Transmitter ကိုရွေးချယ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် FM အသံလွှင့်စက်များအတွင်းမှ နည်းပညာများကို မိတ်ဆက်ပါမည်။
by/ အကောင်းဆုံး FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်
Studio Transmitter Link (STL Link) | အဲဒါက ဘာနဲ့ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
ဤဘလော့ဂ်သည် STL လင့်ခ်စနစ်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ အမျိုးအစားများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပါအဝင် စတူဒီယိုထုတ်လွှင့်သူလင့်ခ်တစ်ခု အလုပ်လုပ်ပုံကို သင့်အား ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။
by/ STL Link အကြောင်း
FM အသံလွှင့်စက်သည် မည်မျှအထိ သွားနိုင်မည်နည်း။ - အခန်း 1 - FM အသံလွှင့်ခြင်း အလုပ်လုပ်ပုံ
မတူညီသော ပါဝါရှိသော အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်စက်များ၏ လွှမ်းခြုံမှုအကွာအဝေးသည် မတူညီပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် transmitter ၏ စွမ်းအား ကြီးမားလေ၊ ၎င်း၏ လွှမ်းခြုံမှု ကျယ်ပြန့်လေ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း၊ ထုတ်လွှင့်သူအား သီအိုရီအရ လွှမ်းခြုံသည့်အကွာအဝေးသို့ရောက်ရှိရန် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များစွာရှိပါသည်၊ ဤမျှဝေမှုသည် ကွဲပြားသောစွမ်းအားဖြင့် FM ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ၎င်းတို့၏ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်မှုကို ဟန့်တားသည့်အချက်များကို အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။
by/ FM အသံလွှင့်ခြင်း အလုပ်လုပ်ပုံ
အသံလွှင့်ရေဒီယိုစခန်း စက်ပစ္စည်းစာရင်း အပြည့်အစုံ (ပုံများနှင့်အတူ)
Radio Station Rack Room သို့မဟုတ် Engineering Room ( Central Apparatus Room ဟုလည်းလူသိများသည် ) သည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်စနစ်တစ်ခုလုံး၏ မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ များစွာသော ကြီးမားသော အသံလွှင့်ကိရိယာများဖြစ်သည့် ဂြိုလ်တုလက်ခံကိရိယာများ၊ FM အသံလွှင့်စက်များနှင့် အသံများကဲ့သို့ ကျယ်ဝန်းသော သိုလှောင်ခန်းတွင် ထားရှိထားပါသည်။ ပရိုဆက်ဆာများ အစရှိသည်တို့၊ သင်သည် ရေဒီယိုစခန်းအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်လိုပါက ရေဒီယိုဌာနအတွက် ပင်မပစ္စည်းကိရိယာများကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကို မသိပါက၊ ပုံမှန်ရေဒီယိုဘူတာရုံ rack room ၏ ဤကိရိယာများစာရင်းသည် သင့်အား ကောင်းမွန်စွာကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
by/ ရေဒီယိုဌာန စက်ပစ္စည်းစာရင်း
FM အသံလွှင့်စက် မဝယ်မီ သတိပေးချက်များ
အကယ်၍ သင်သည် အရည်အသွေး စိတ်ချရသော FM အသံလွှင့်စက်ကို ရှာဖွေနေသော်လည်း ၎င်းကို ရွေးချယ်ရန် မသေချာပါက၊ သင်၏ အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ ဤဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Printed Circuit Borad ကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။ | PCB ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ဟုလည်းသိကြသော PCB သည် မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသော socket အစိတ်အပိုင်းများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် မတူညီသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါပေမဲ့ ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ဘာလဲ။ ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ကို ဘယ်လိုဖန်တီးသလဲ။ ပိုမိုအသုံးဝင်သောအချက်အလက်များအတွက် အောက်ပါအကြောင်းအရာကို ဖတ်ရှုပါ။
by/ PCB Board ပြုလုပ်နည်း